Saint Petersburg State University - Study in Russia
gaabinta : SPSU
aasaasay : 1724
Ardayda (qiyaastii.) : 33000
Ha iloobin in aad wada hadlaan Saint Petersburg State University
Qor at Saint Petersburg State University
In ka badan 290 sano, St. University Petersburg ayaa ka go'an in ay sayniska horumarinta, guud ahaan aqoonta iyo tababar xirfad fiican. University waa hodan ku ah taariikhda - waxay taariikhda in ay dib ugu 1724, markii Peter Weyn aasaasay Academy of Sciences and Arts iyo sidoo kale Jaamacadda ugu horeysay Waxbarashada ee Russia.
The Qalinjabiyeyaasha caanka SPbU waa il kibirka iyo sharaf, oo na dhiiri luuqeeyo iyo kor noo iman kara in cilmi-baarista iyo waxbarashada. Mid Qalinjabiyeyaasha iyo shaqaalaha, waxaa jira tiro aan caadi ahayn oo dadka ugu caansan dunida ee, khaas ahaan, Kooxda ku guuleysatay Nobel Prize: physiologist Ivan Pavlov, nin cilmiga nafleyda barta Ilya Mechnikov, farmashiyaha jirka Nikolay Semyonov, physicists Lev Landau iyo Aleksandr qaarna, Faylasuuf oo ah dhaqaaleyahan Leonid Kantorovich. SPbU sidoo kale waa Mater Alma ah cilmi fiican, culimada, aqoonyahano, madaxda siyaasadda iyo arrimaha bulshada: Dmitry Mendeleev, Vladimir Vernadsky, iyo Dmitry Likhachev magaca laakiin dhowr ah. Duniduna waxay leedahay our University madaxda dhaqanka ugu caansan, qorayaasha iyo fanaaniinta: Ivan Turgenev, Pavel Bryullov, Alexander Blok, Alexander Benois, Sergei Diaghilev iyo Igor Stravinsky. Waxaa ka mid ah Qalinjabiyeyaasha University, waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in la xuso madaxda dowladda Ruush: Boris Forward, Alexander Kerensky, Vladimir Lenin, Madaxweynayaasha Federation Ruushka Vladimir Putin iyo Dmitry Medvedev.
maanta, saddex qarniyo ka dib markii la aasaasay, Station Gas ku dadaaleysa, sidii hore, si uu u hoggaamiyo cilmi-baarista iyo waxbarashada on qiyaasta qaran iyo heer caalami. By isu keeno dhaqanka iyo tabo cusub, St. University Petersburg oo dhigaya xawaaraha horumarka sayniska, waxbarashada iyo dhaqanka ee Russia iyo dunida oo dhan.
SPbU buuxda aadamuhu ardayda iyo shaqaalaha ay ugu fiican ee kala duwan ee kala duwan ee fursadaha waxbarashada, cilmi-baarista iyo horumarinta shakhsiyeed: Maktabadda ugu qanisan Research magacaabay ka dib markii M. Gorky, a Research Park gobolka-of-the-art, laboratories madax by saynisyahano keentay, matxafyada, guri bandhiga, naadiyada isboortiga, heesta University a, orchestras, riwaayadaha iyo qoob ka istuudiyaha iyo wixii la mid ah.
Bishii November 2009, Madaxweynaha Dmitry Medvedev Federation Ruush ah u saxiixay sharci bixinta St. Petersburg University iyo Moscow State University xaaladda gaarka ah ee 'kaxeynayo sayniska iyo waxbarashada gaarka ah, hay'adaha ugu da'da weyn ee waxbarashada sare ee Russia isagoo ka mid ah muhiimadda ugu weyn ee horumarinta bulshada Ruushka '. SPbU la siiyey mudnaan u dhigay heerka ay waxbarashada gaarka ah iyo abaal marin shahaadado u gaar ah.
Baro University ugu horeysay ee Russian hadda.
Ku soo dhawow saldhigyada gaaska!
Yours si xushmad leh,
saldhiga gaaska Raktarka
aasaasay sannadkii 1724 by Peter Weyn, Jaamacadda Saint Petersburg ahaa si ay u noqdaan hay'ad hore ee tacliinta sare ee Russia. SPbU waa jaamacad keentay Ruush la barayeen oo heer cilmi ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya dunida ee kaalinta. Waxaan u furan yihiin iskaashi oo wuxuu ku raaxaysan xiriir weyn la leh cilmi-baarista caalamiga ah iyo beesha tacliimeed. saynisyahano SPbU shaqeeyaan dhowaad dhammaan beerihii aqoonta, bixinta khibrad iyo wada tashiga ee iskaashi dhow la leh wada-hawlgalayaasha Ruush iyo kuwa caalamiga ah. culimada fiican oo badan ayaa waxa ay qayb ka mid ah bulshada ku SPbU, oo ay ku jiraan sagaal guuleysatay Nobel Prize: physiologist ee Ivan Pavlov, nin cilmiga nafleyda barta Ilya Mechnikov, jirka iyo farmashiyaha Nikolay Semyonov, physicists Lev Landau iyo Aleksandr qaarna, Faylasuuf oo ah dhaqaaleyahan Wassily Leontief iyo sidoo kale xisaab iyo dhaqaaleyahan Leonid Kantorovich.
Mid University Qalinjabiyeyaasha yihiin Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin Federation, Ra'iisul-wasaaraha Dmitry Medvedev, Agaasimaha Mikhail Hermitage ka Piotrovskiy, Madaxweynaha Academy Ruush Waxbarashada Liudmila Verbitskaya, xisaabyahannada Grigoriy xiraale iyo Sergey Smirnov iyo sidoo kale kuwo kale oo badan.
St. Petersburg University Maanta
6,000 xubnaha shaqaalaha
106 barnaamijyada undergraduate
205 Barnaamijyada sayidkiinna iyo meelaha takhasuska
263 Barnaamijyada shahaadada phD
29 barnaamijyada caafimaad degenaanshaha
ardayda caalamiga ah ka badan 70 dalalka
ka badan 3 000 ardayda caalamiga ah ee barnaamijyada degree iyo non-degree
350 jaamacadaha lammaane
Jaamacada ugu fiican Research Park ee Russia
7,000,000 buugaagta ee dhinacyada soo ururinta ee Library Research Jaamacadda
shahaadada soo saaray ee Ruush iyo English
12,800 meelaha ee hoolalka deggan
ka qaybgalka arday firfircoon habka waxbarashada;
xaqiijinta ugu fiican ee ka iman kara shaqsi ardayga;
ECTS - System Credit Transfer Yurub;
nidaamo tacliinta waxaa loogu talagalay sida ay mabda'a qaybsan;
dhaafsi la jaamacadaha lammaane
layliyo iyo shaqo ee shirkadaha Ruush iyo kuwa caalamiga ah hogaaminaya;
helitaanka tas-hiilaadka cilmi-baarista gaar ah, technology iyo qoraalka buuxa database elektarooniga ah;
teknoolajiyada waxbarasho oo casri ah;
gobolka-of-the-art qalabka cilmi;
deeqaha dawladda ee codsadayaasha caalami ah ugu wanaagsan ee la doortay (waxbarashada lacag la'aanta ah iyo hoy dhimis);
fursad inay ka adkaadaan Ruush ee Institute of Language Ruushka iyo Dhaqanka.
Kuliyada Applied Xisaabta iyo Control Habsocodsiinta
Kuliyada Ilkaha iyo Medical Technology
Kuliyada Liberal Arts iyo Sciences
Kuliyadda Xisaabta iyo makaanikada
Kuliyada Studies Oriental
Kuliyadda Sayniska Siyaasadda
School of Journalism iyo Mass Communications
Kuliyada Applied Communications
Waxaa lagu muransan maamulka jaamacadda haddii Saint Petersburg State University ama Moscow State University waa hay'ad ugu da'da waxbarashada sare ee Russia ka. Iyadoo dambe waxay ku sii dhisnaatay 1755, hore, ayaa hawlgal joogto ah tan iyo markii ay 1819, ayaa sheegtay in ay bedeli ee jaamacadda la aasaasay oo ay la socdaan Gymnasium Waxbarashada iyo Petersburg Academy Saint ee Sciences on January 24, 1724 oo amar ah Peter Weyn.
In wakhtiga u dhaxeeya 1804 iyo 1819, Jaamacadda Saint Petersburg si rasmi ah ma jiraan; hay'ad ku aasaasay by Peter Weyn, ka Petersburg Academy Saint, mar hore lagu kala diray, maxaa yeelay cusub 1803 charter ah Academy of Sciences ku xusan in ay jiraan waa in aysan hay'adaha waxbarashada la jaalka la.
Petersburg koriska Machadka, baxshay Institute Main koriska ee 1814, waxaa la aasaasay sannadkii 1804 oo degan qayb ka mid ah dhismaha iyo toban Collegia ah. On February 8, 1819 (O.s.), Alexander I of Russia habayn Main koriska Institute galay Jaamacadda Saint Petersburg, oo wakhtigaas ka koobnaa saddex kulliyadood: Kuliyada Falsafadda iyo Sharciga, Kuliyada History iyo Philology iyo Kuliyada Physics iyo Xisaabta. Main koriska Machadka (halkaas oo Dmitri Mendeleev bartay) bogsatay in 1828 sida madax bannaan hay'adda waxbarashada ee Jaamacadda Saint Petersburg, iyo barayaasha tababaran ilaa ugu dambeyntii waxaa la xiray 1859.
In 1821 jaamacad la baxshay Petersburg Imperial University Saint. In 1823 ugu of jaamacadda dhaqaaqay ka Collegia tobankii in qaybta koonfureed ee magaalada ka baxsan Fontanka ah. In 1824 version a modified ee charter ee University Moscow la ansixiyay sida charter hore ee Petersburg Imperial University Saint ah. In 1829 waxaa jiray 19 Professor buuxa iyo 169 ardayda wakhti buuxa iyo waqti-dhiman ee jaamacadda. In 1830 Tsar Nicholas laabtay dhismaha oo dhan Collegia tobankii in jaamacadda dib, iyo koorsooyinka waxaa dib u bilaabay. In 1835 Axdiga cusub ee Jaamacadaha Imperial ee Russia ayaa la ansixiyay. Waxaa la siiyaa aasaaska u ahaa Kulliyadda Law, Kuliyada History iyo Philology, iyo Caqlina Physics iyo Xisaabta ayaa darsadeen Kulliyadda ee Philosophy sida 1aad iyo 2aad Departments, siday u kala horreeyaan.
In 1849 ka dib markii Spring of Nations ee Senate ee Empire Ruush qadaray in Raktarka waa in loo magacaabay Wasiirka Nuurin National halkii doorteen Golaha jaamacadda. Si kastaba ha ahaatee, Pyotr Pletnyov waxaa Anan iyo Birmingham oo ugu dambeyntii noqday Raktarka dheer shaqeynayay oo ka mid ah Jaamacadda Saint Petersburg (1840-1861).
In 1855 waxbarashada Oriental la kala Kuliyada History iyo Philology, iyo macalimiinta afaraad, Kuliyada Luqadaha Oriental, waxaa si rasmi ah u caleemo saaray August 27, 1855.
In 1859-1861 dumar ah ardayda waqti-dhiman ka qayb yaabaa muxaadarooyin jaamacadda. In 1861 waxaa jiray 1,270 waqti-buuxa ah iyo 167 ardayda waqti-dhiman ee jaamacadda, iyaga ka mid ah 498 ahaayeen ee Kulliyadda Law, hoosaadka ugu weyn. Laakiin hoosaadka lahaa waaxda waxbarashada cameral, halkaas oo ardaydu ka bartay ammaanka, caafimaadka shaqaalaha iyo maamulka injineernimada deegaanka iyo sayniska, oo ay ku jiraan chemistry, biology, garafyada ay la socdaan sharciga iyo falsafada. Dad badan oo Ruush, iwm Joorijiyaan. maareeyayaasha, injineerada iyo saynisyahano bartay ee Kuliyadda sharciga oo sidaas daraaddeed. Inta lagu jiro 1861-1862, waxaa jiray rabshado arday ee jaamacadda, oo ku meel gaar ah waxaa la xiray laba jeer sanadka gudihiisa. ardayda ayaa beeniyay xoriyadda isu imaatinka iyo kaalinta hoos ilaalo booliska, iyo muxaadarooyin guud waxa laga reebay,. Arday badan ayaa laga eryey. Ka dib markii ay rabshado ka, in 1865, oo keliya 524 ardayda ku hadhay.
amar A of Emperor Alexander II ee Russia qaatay on 18 February 1863 soo celiyo xaq shirka jaamacadda inay doortaan Raktarka. Waxaa kale oo la aasaasay awood cusub oo ka mid ah aragtida iyo taariikhda tahay qayb ka mid ah macalimiinta ka mid ah taariikhda iyo philology.
In March 1869, xasillooni darrada ardayga ruxmay jaamacadda mar kale laakiin on miisaanka yar. by 1869, 2,588 ardayda ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda.
In 1880 Wasaaradda Nuurin National reebnay ardayda in ay guursadaan iyo dadka is qaba oo aan la qirtay yaabaa. In 1882 ardayga xasillooni kale ka dhacay jaamacadda. In 1884 Axdiga cusub oo ka mid ah Jaamacadaha Ruush Imperial la ansixiyay, kaas oo siiyey xaq u leedahay inaad doorataa Raktarka in Wasiirka Nuurin National mar kale. On March 1, 1887 (O.s.) koox ka mid ah ardayda jaamacadda waxaa la xiray halka qorsheyneysa isku day ah oo ku saabsan nolosha Alexander III of Russia. Sidaas darteed, sharciyada gelitaanka cusub inay jimicsi iyo jaamacadaha ayaa ansixiyey Wasiirka National Nuurin Ivan Delyanov in 1887, oo mamnuucay dadka asal ahaan ayay taraan, ka gelitaanka jaamacadda, haddii aanay ahaayeen caadi tayo leh.
by 1894, 9,212 ardayda ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda. Waxaa ka mid ah culimada caanka ah ee qeybtii labaad ee qarnigii 19aad oo xiriir la leh jaamacadda ahaayeen xisaab Pafnuty Chebyshev, jirka Heinrich Lenz, farmashiye Dmitri Mendeleev andAleksandr Butlerov, embryologist Alexander Kovalevsky, physiologist Ivan Sechenov, pedologist Vasily Dokuchaev. On March 24, 1896 (O.s.), on campus ee jaamacadda Alexander Popov si cad u muujiyeen gudbinta hirarka radio markii ugu horeysay ee taariikhda.
Sida of January 1, 1900 (O.s.), waxaa jiray 2,099 ardayda ku diiwaangashan ee Kuliyada Sharciga, 1,149 ardayda ee Kulliyadda Physics iyo Xisaabta, 212 ardayda ee Kulliyadda Languages ​​Oriental iyo 171 ardayda ee Kulliyadda taariikhda iyo Philology. In 1902 hall ugu horeysay ee ardayga cuntada ee Russia oo la furay ee jaamacadda.
Tan ku saabsan 1897 weerar joogto ah iyo xasillooni arday ruxmay jaamacadda iyo faafin in hay'adaha kale ee waxbarashada sare ee guud ahaan Russia. Inta lagu jiro Kacaanka ee 1905 charter oo ka mid ah jaamacadaha dalka Ruushka ayaa lagu beddelay mar kale, hoosaad ka mid ah jaamacadaha la qayb ahaan dib loo soo celiyo iyo xaq u leeyihiin inay doortaan Raktarka soo noqday guddiga tacliinta markii ugu horeysay tan iyo markii uu 1884. In 1905-1906 jaamacadda waxaa ku meel gaar ah la xiray sababo la xiriira rabshadihii ardayga. Its madaxbannaani waxaa lagala mar kale in 1911. In isla sanadkaas jaamacadda waxaa mar kale ku meel gaar ah la xiray.
In 1914 iyadoo bilowgii dagaalkii koowaad ee aduunka, jaamacad la baxshay Petrograd Imperial University ka dib markii magaalada ay isku magaca yihiin. Intii lagu guda jiray dagaalkii ugu jaamacadda ahaa xarunta muhiim ah oo abaabulka khayraadka caqliga Ruush iyo deeq loogu talagalay guusha. In 1915 laan ka mid ah jaamacadda la furay in Perm, taasi oo markii dambe noqday Perm State University. The Golaha of Petrograd Imperial University bayaan soo dhaweeyay Revolution February ee 1917, oo joojiyaan in Boqortooyada Ruushka, iyo jaamacad u yimaadeen inay la yaqaan oo kaliya University Petrograd. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii October Revolution ee 1917, shaqaalaha iyo maamulka jaamacadda markii hore caaridi in wareegay Bolshevik awoodda iyo diidan in ay iskaashi la Narkompros ah. Later ee 1917-1922 socday dagaalkii sokeeye ee dalka Ruushka qaar ka mid ah shaqaalaha oo looga shakiyay in tacsiyadaynaynaa counter-kacaan gaaray xabsi (tus, Lev Shcherba in 1919), dil, ama looma masaafurin karo dibadda on the Philosophers loogu yeero’ doonniyo ku 1922 (tus, Nikolai Lossky). Intaas waxaa sii dheer, shaqaalaha oo dhan soo gaartay gaajada iyo saboolnimada ba'an lagu jiro sano kuwa.
In 1918 jaamacad la baxshay 1aad Petrograd State University, iyo in 1919 Narkompros waxaa ku biireen PSU 2aad (Institute hore ee Psychoneurological) iyo PSU 3aad (Koorsooyinka hore Bestuzhev Sare ee Dumarka) galay Petrograd State University. In 1919 Kuliyadda Sayniska Bulshada waxaa la aasaasay by Narkompros halkii Kuliyada History iyo Philology, Kuliyada Luqadaha Oriental iyo Kulliyadda Law. Nicholas Marr noqday Dean hore ee macalimiinta cusub. Chemist Alexey Favorsky noqday Hormoodka Kuliyadda of Physics iyo Xisaabta. koorsooyinka Rabfaks iyo jaamacad free furmeen ku salaysan jaamacadda si ay u siiyaan waxbarashada mass. In dayrta ee 1920, sida arkay arday Freshman Alice Rosenbaum, diiwaangelinta wuxuu furan oo inta badan ardayda waxay ahaayeen anti-communist oo ay ku jiraan, ilaa laga saaray, a soo horjeeda yar vocal ee Itobiya. Arkaa in ay wacyi- “cadaawayaashiinna fasalka”, u nadiifisaa ah ayaa lagu qabtey 1922 ku salaysan asalka fasalka oo ka mid ah ardayda iyo ardayda oo dhan, kale oo aan ahayn waayeelka, oo ka soo jeeda a ganacsade hijrooday.
In 1924 jaamacad la baxshay Leningrad State University ka dib markii magaalada ay isku magaca yihiin. Si loo xakameeyo mucaaradka caqliga si xoog Soviet, tiro ka mid ah taariikhyahanadu ka shaqeeya jaamacadda, oo ay ku jiraan Sergey Platonov, Yevgeny Tarle iyo Boris Grekov, ayaa xabsi ku affære waxa loogu yeero Waxbarashada ee 1929-1930 oo lagu eedeeyay been abuur ah oo ka qayb shirqool counter-kacaan a loogu talagalay dumin dowladda. xubnaha kale ee shaqaalaha qaarkood ayaa cadaadiyo ee 1937-1938 intii lagu safayn Weyn.
Inta lagu jiro 1941-1944 Go'doonsan ee Leningrad ee dagaalkii labaad ee dunida, badan oo ka mid ah ardayda iyo shaqaalaha ka gaajo u dhintay, dagaalka ama ka repressions. Si kastaba ha ahaatee, jaamacadda joogto ah ku shaqeeya, daadgureeyay in Saratov ee 1942-1944. laan ka mid ah jaamacadda waxaa marti ku Yelabuga intii lagu jiray dagaalka. In 1944 ka Presidium ee Golaha Sare ee Midowga Soofiyeeti abaal jaamacadda la Order of Lenin oo ku beegnaa-guuradii 125aad iyo in ay ka qayb qaateen in sayniska iyo dhaqanka.
In 1948 Golaha Wasiirada oo la odhan jiray jaamacad ka dib markii Andrei Zhdanov, rasmi communist caan ah oo dhawaan geeriyooday. Go'aanka waxaa la burin in 1989 inta lagu guda jiro Perestroika.
In 1949-1950 dhowr Professor dhintay xabsi inta lagu jiro baaritaanka affære Leningrad ee abuurtay by hoggaanka dhexe ee Soviet, iyo Wasiirka Waxbarashada ee RSFSR ah, Raktarka hore Alexander Voznesensky, waxaa la dilay.
In 1966 Golaha Wasiirrada go'aansaday in la dhiso a campus cusub magaalada hareeraheeda ah in Petrodvorets ugu xisaabta iyo Caqlina sayniska dabiiciga ah. dejinta ee kulliyadaha la buuxiyo 1990.
In 1969 ka Presidium ee Golaha Sare ee Midowga Soofiyeeti abaal jaamacadda la Order ee Banner Cas ee Labour.
In 1991 waxaa jaamacadda dib loo baxshay in Saint Petersburg University State ka dib markii magaalada ay isku magaca yihiin.
Ma rabtaa wada hadlaan Saint Petersburg State University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Saint Petersburg State University rasmiga ah Facebook
dib u eegista Saint Petersburg State University
Ku biir si ay ugala hadlaan of Saint Petersburg State University.
Plekhanov Ruush University of Economics Moscow
Ufa State University Aviation Technical Ufa